ဒါဟာစွဲဦးနှောက်ဖို့ "အန္တရာယ်" ညီမျှတဲ့ဘုံနှင့်မှားယုံကြည်ချက်င်, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းစွဲလမ်းဖြစ်ပါသည် စေ၏ ဦးနှောက်ကိုဖို့ "ထိခိုက်ပျက်စီးမှု" က။ အခြို့သောစွဲလမ်းတ္ထုများ (meth, အရက်) neurotoxic နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, စွဲသေချာပေါက် "ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကို" အဖြစ်ခွဲခြားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများတိကျတဲ့ constellation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Debunking စွဲလမ်းအဖြစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု meme, nikotine (စီးကရက်မှတစ်ဆင့်ပို့သည်) ကိုအချို့သောစွဲလမ်းစေသောအရာများဟုယူမှတ်သော်လည်းနီကိုတင်းသည် ဦး နှောက်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်အပြင်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိသည်။ (“ စွဲလမ်းမှုအများဆုံး” ဆိုသည်မှာသုံးစွဲသူအများစုသည်နောက်ဆုံးတွင်စွဲလမ်းသူများဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလိုသည်) ။ နီကိုတင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းဆောင်းပါးများကိုကြည့်ပါ။ နီကိုတင်း: မူးယစ်ဆေးမြှင့်တင်ခြင်းတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ပုံပေါက်ဦးနှောက်။
စွဲနေတဲ့အဓိကအားဖြစ်ပါသည် သင်ယူမှု & မှတ်ဉာဏ်၏ရောဂါ - စွဲလမ်းမှုဖြစ်စေသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများသည် (သို့သော်အားလုံးမဟုတ်) တွင်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်တွင်ပါ ၀ င်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုထားသည်။ တစ်သင်ယူ Disorder အဖြစ်စွဲ။ သူကပြောပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သော desensitization သို့မဟုတ် hypofrontality အဖြစ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုမရတင်းကြပ်စွာသင်ယူခြင်း၏ထီးအောက်မှာအပြောင်းအလဲများကိုပါဝင်နိုင် (မီးခိုးရောင်အမှုဆုံးရှုံးခြင်း, ဇီဝြဖစ်လျှော့ချ, functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွား) ။
အကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုဖွံ့ဖြိုးတဲ့သူတွေဟာမူးယစ်ဆေးစွဲသူတွေရဲ့ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာစွဲသူသုတေသီတွေကသဘောတူကြပါတယ်။ ၎င်းသည်ဆယ်လူလာနှင့်ဇီဝဓာတုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတိုင်းကိုစွဲလမ်းမှုရှိသူတိုင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အဲဒီအစား, ကအားလုံးစွဲကြောင်းဆိုလိုသည် ဝေစု အနည်းငယ် key ကိုဦးနှောက်မူမမှန်။ ယခုနှစ်ထုတ်ဝေဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်လေးကိုအဓိကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲမူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်"စွဲလမ်းမှု၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ် (2016) မှ Neurobiologic တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ"။ အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ကဒါဟာမှတ်တိုင်ပြန်လည်သုံးသပ် (NIAAA) ဂျော့ခ်ျအက်ဖ် Koobမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Institute ၏, ထိုညွှန်ကြားရေးမှူး (NIDA) Nora ဃ Volkowစွဲလမ်းထဲမှာပါဝင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြထားပါတယ်မသာ, သောကြောင့်လည်းလိင်စွဲရှိကွောငျးက၎င်း၏အဖွင့်စာပိုဒ်ထဲမှာအကြံပြု:
ရိုးရှင်းများနှင့်အလွန်ကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများအတွက်အဓိကအခြေခံစွဲ-စေသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုနေသောခေါင်းစဉ်: 1) အသိ, 2) Desensitization, 3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality), 4) အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4သည့်ကြားတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲလမ်းအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံ -based လေ့လာမှုများ:
အသိ (cue-reactivity & cravings) လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အကျိုးအမြတ်ရှာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်ဆားကစ်များသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများ (သို့) သတိများကိုအလွန်အမင်းအာရုံခံစားမှုဖြစ်စေသည်။ ဤရလဒ်သည် နုတ်မ like နှိပ်သို့မဟုတ်အပျြောအပါးနေချိန်တွင် "လို" သို့မဟုတ်တဏှာတိုးလာ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သော, ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့ pop-up ကိုမြင်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တွေကို, porn အဘို့မတရားသောလျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲပြင်းထန်သောဖြစ်ပေါ်။ တချို့က ': porn တစ်ဦးတည်းသာလွတ်မြောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဝင်' 'အဖြစ်ထိခိုက်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြရန်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးအလုအယက်, လျင်မြန်သောနှလုံးခုန်ပင်တုန်လှုပ်, သင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးပြွန် site ကိုပေါ်သို့ logging ဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။ porn အသုံးပြုသူများကိုထိခိုက်သို့မဟုတ် cue-reactivity ကိုသတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Desensitization (sensitivity ကိုဆုချလျော့နည်းသွား): ဒီရေရှည်ဓာတုနှင့်တစ်ဦးချင်းစွန့်ခွာကြောင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကပါဝင်ပတ်သက် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့။ Desensitization သည်မကြာခဏဆိုသလိုသည်းခံနိုင်စွမ်းကိုပြသခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တူညီသောတုန့်ပြန်မှုကိုရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးထိုးရန်သို့မဟုတ် ပိုမို၍ လှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်အွန်လိုင်းတွင်အချိန်ပိုကုန်ကြသည်။ အနားယူရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုကိုရှာဖွေခြင်း၊ အနားမယူသည့်အခါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Desensitization သည်အမျိုးအစားအသစ်များသို့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ပို၍ ခက်ခဲပြီးလူစိမ်းသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သတိရပါ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အံ့အားသင့်ခြင်း၊ လေ့လာမှုအချို့တွင်လေ့ကျင့်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုယန္တရားများပါဝင်သော“ လေ့ကျင့်ခြင်း” ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှု (သို့) အလေ့အကျင့်ရှိခြင်းကိုသတင်းပို့ခြင်း။ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (အားနည်းသောစွမ်းအား + အားကိုဓါတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်အားဖြည့်ခြင်း) - ကြိုတင်မျက်နှာပြင်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဆုိုင်ရာဆားကစ်နှင့်တိုကျိုပေါ်၌ရှိသောအမြှေးများအကြားဆက်သွယ်မှုများလျော့နည်းသွားစေပြီးစိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal ဆားကစ်များကသင့် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုသည်စစ်ပွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟူသောခံစားချက်ကိုပြသသည်။ အဆိုပါအသိစိတ်စွဲလမ်းများ 'ဟုတ်ကဲ့!' ဟုအော်ဟစ်နေကြသည် သင်၏ ဦး နှောက်က 'မဟုတ်ပါ၊ နောက်တဖန်မလုပ်ပါနှင့်' ဟုဆိုနေစဉ် သင့် ဦး နှောက်၏အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းများသည်အားနည်းနေသောအခြေအနေတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းများသည်အနိုင်ရသည်။ porn အသုံးပြုသူများတွင်“ hypofrontality” သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲ၍ prefrontal လုပ်ဆောင်မှုကိုအစီရင်ခံသောလေ့လာမှုများ။ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ် - ၎င်းသည်အစွမ်းထက် sensitized လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်စေသောကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းစေပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲသူများအတွက်စိတ်မပါသောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုအစီရင်ခံသည့်လေ့လာချက်များ - 1, 2, 3, 4, 5.
ဤသာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပါသလား အမှတ်သည်ဤကျယ်ပြန့်ဖြီးညွှန်းကိန်းတစ်ခုချင်းစီမျိုးစုံသိမ်မွေ့ထင်ဟပ် စွဲ-related ဆယ်လူလာများနှင့်ဓာတုပွောငျးလဲကင်ဆာအကျိတ်များ၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသိမ်မွေ့ဆယ်လူလာ / ဓာတုပြောင်းလဲမှုများကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့။ လိုအပ်သောနည်းပညာများ၏ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုကြောင့်သိမ်မွေ့သောပြောင်းလဲမှုအများစုကိုလူ့ပုံစံများတွင်အကဲဖြတ်။ မရပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခံရသည် (NIDA ၏ခေါင်းဆောင် Nora D. Volkow ကဤမတ်လ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မတ်လကိုကြည့်ပါ) ကျနော်တို့ကဦးနှောက်ရောဂါစွဲ Call လိုက်တဲ့အခါဒါဟာဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနညျး).
အာရုံခံမှုသည်အဓိက ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်၊ ၎င်းသည်သင်မည်သည့်အရာပင်ဖြစ်ပါစေ၎င်းကိုတပ်မက်အောင်ပြုလုပ်ပေးပြီးအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုကဲ့သို့တူညီသောယန္တရားများပါ ၀ င်သည်။ စောင့်ကြည့် - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကနေတစ်ဆင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းအကြောင်းပါ။ တကယ်တော့ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှု (နှင့် 20 အခြားသူတွေအတွက် ဤစာရင်းတွင်) compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်ာင်း ( သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော) တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူကပြောပါတယ်, တစ်ခုချင်းစီကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဇီဝကမ္မဗေဒကိုထူးခြားစွာသက်ရောက်သည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုမလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကိုကင်းနှင့်မက်ကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်သဘာဝအားဖြင့်ရရှိနိုင်သောအဆင့်များထက် (ပထမပိုင်းတွင်) dopamine ကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောကြောင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများမလုပ်နိုင်သည့် dopamine စနစ်များကိုအမြဲတမ်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်စပီကာများကဖော်ပြသည့်အခါမမှန်ကန်ပါ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရုံ meth ကြိုက်တယ်သို့မဟုတ်ကင်း crack ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောနှိုင်းယှဉ်မှုများကလူကိုညစ်ညမ်းရုပ်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေသည်ဟုလူတို့အားယူမှတ်စေသည်။ အချို့သူများအတွက်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းသည်ကန်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းထက် ပို၍ ခက်ခဲသော်လည်းအာရုံကြောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ တစ် ဦး စွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက်အခက်အခဲရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ neuroplastic ပြောင်းလဲမှုအဆင့်နှင့်ဆက်စပ်မှုလိမ့်မည်။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်မတည်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ သူတို့သည်“ မသင်မနေရများ” ဖြစ်သော်လည်းစစ်မှန်သောစွဲလမ်းမှုမလုပ်နိုင်ဟုပြောဆိုသူများသည် ပို၍ ပင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ မော်လီကျူး switch တစ်ခုသည်အပြုအမူနှင့်ဓာတုဗေဒစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုစလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ထိုသို့သောထုတ်ပြန်ချက်များသည်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမရှိပါ။ စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုအစပျိုးသော master switch သည်ပရိုတိန်းဖြစ်သည် DeltaFosB။ ၏စားသုံးမှုမြင့်မား သဘာဝကဆုလာဘ် (လိင်, သကြား, High-အဆီ) သို့မဟုတ်အကျိုးကိုစင်တာများတွင်စုပြုံမှအလွဲသုံးစားမှုအကြောင်းမရှိ DeltaFosB ၏နီးပါးမည်သည့်မူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှု။
စွဲ neuroplasticity အဖြစ်အကျဉ်းချုပ်ခံရနိုင်သည် synapses အတွက်ဆက်လက်စားသုံးမှု→ DeltaFosB →မျိုးဗီဇ၏ activation →အပြောင်းအလဲများကို→ထိခိုက်စေ desensitization။ (ကြည့်ရှုပါ အဆိုပါစွဲဦးနှောက် ပိုပြီးအသေးစိတ်ဘို့။ ) ဒါဟာပုံ စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုနောက်ဆုံးမှာဦးဆောင်လမ်းပြ (အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးရန်hypofrontality) နှင့်တစ်ဦးပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, စွဲလမ်း၏အခြားအဓိကအင်္ဂါရပ်များ။
DeltaFosB ရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက်လှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်ပါသည် ငါတို့ကို“ ရသည့်အမှုအရာကောင်းနေစဉ်တွင်ရယူပါ။ ” ဒါဟာအဘို့အမူးရူးယန္တရားပါပဲ အစာ နှင့် များပြားအောင်လုပ်ခြင်းအခြားအချိန်များနှင့် enviroments မှာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရာ။ ဒီရက်ကစှဲဖို့စေသည် junk အစားအစာ 1-2-3 ကဲ့သို့လွယ်ကူသောနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း။
သူတို့ချီးမြှင့်သောကြောင့်, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများသာစွဲလမ်းစေသတိပြုပါသို့မဟုတ်ယန္တရားများတားစီး ရှိပြီးသားသဘာဝကဆုလာဘ်အဘို့အရာဌာန၌။ ဒီအစွဲဆေးပညာအဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည် တည်ပြီးသတ်တယ်ကဤသို့ဆို၏ ကြောင်းအစားအသောက်နှင့်လိင်စွဲလမ်းစစ်မှန်တဲ့စှဲဖြစ်ကြသည်။
စွဲလမ်းကြောင်း၏အသိမြှမူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆက်လက်ရှိစေခြင်းငှါတဦးတည်းကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများအတွက်ဤလမ်းကြောင်းသည်ခိုင်ခံ့ဖြစ်ပေါ်သောအခါ, ဆုလာဘ် circuitry တက် crank ပေးသောအမှတ်တရများ, ဤသို့မတရားသောကိုယ်စားပြုသည်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ sensitization ညှိုးနွမ်းကြလိမ့်မည်နည်း အဲရစ် Nestler အဲဒီလိုယူဆတယ်။ သူသည်စွဲလမ်းမှု၏ ဦး နှောက်ယန္တရားများအပေါ်များစွာသုတေသနပြုသည်။ ဤတွင်သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှမေးခွန်းနှင့်အဖြေများရှိသည်။ သူသည် DeltaFosB ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောပရိုတိန်းနှင့်ကူးယူနိုင်သည့်အချက် (ဆိုလိုသည်မှာမျိုးဗီဇများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်သည်)
09 ။ သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာအပြောင်းအလဲများကိုပြောင်းပြန်ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
A. “ ဦး နှောက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတာသက်သေအထောက်အထားမရှိဘူး။ ယင်းအစားနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တတ်သော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်ပြီးပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအကျင့်ဆိုးများ (အတင်းအကျပ်) ကို“ နားမလည်” ရန်လိုအပ်သည်။
သို့သော်အပြောင်းအလဲများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မသိသောအချိန်ကာလအချို့အတွက်ကြာရှည်နေတတ်သည်။ DeltaFosB သည်ပုံမှန်အထက်စားသောအစားအစာနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းစုဆောင်းနေကြောင်းထင်ရှားသည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအားပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမှယေဘူယျအားဖြင့် ၄ ပတ်မှ ၈ ပတ်အတွင်းအပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများသည် DeltaFosB တွင်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ပါသလား။
“ The Pleasure Principle” မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှ သိပ္ပံ မဂ္ဂဇင်း:
သို့သော် Nestler နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်စွဲလမ်းမှုအတွက်တိကျတဲ့ပုံသဏ္thatာန်အနည်းဆုံးမော်လီကျူးတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ [DELTA] -FosB ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလမ်းကြောင်း၌တည်ဆောက်ပေးပြီးနောက်ဆုံးပရိုတင်းထက် ၄ ပတ်မှ ၆ ပတ်အထိကြာသည်။ ပရိုတိန်းသည်တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမိုထိရောက်စွာခံစားနိုင်ပြီးထိုးသွင်းပါကထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
DeltaFosB လည်းဘီး running (compulsive porn အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုနီးကပ်စွာနေတဲ့အမူအကျင့်စွဲ) ကိုစွဲကြွက်တွေမှာတက်ဆော။
မေးခွန်း DeltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်းအတွက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေပါသလားဖြစ်ပါသည် ဗီဇ- DeltaFosB ကိုယ်တိုင်ထက်ပိုမိုကြာရှည်စွာပတ် ၀ န်းကျင်သည်မည်သူနည်း။ အချို့သော ဦး နှောက်များတွင် 'ထာဝရ' ပင်? သို့ဆိုလျှင်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများသည်အဓိကအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသလော၊
အတော်များများကလေးနက်မူးယစ်ဆေးစွဲ recover နဲ့နောက်ဆုံးမှာမတရားသောမပါဘဲဘဝမှာနေထိုင်ကြသည်။ သူတို့အားအတူတူပင်စွဲသူတို့က၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပေါင်းသင်းအခြေအနေများတွင်ရွေးချယ်မှုဟာသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, မည်မျှ binge မယ်လို့, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းနောက်တဖန်တစ်ဦးကျင့်သုံးစှဲလမျးသူဖြစ်လာ? ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ?
ရှင်းနေသည်မှာစွဲတခါတရံ abstinence ၏ကာလပြီးနောက်ပြန်သွားကြသည်။ တဦးတည်းအမြင်ကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်အမြဲတမ်းစွဲတုံ့ပြန်ရန် (DeltaFosB ဖြင့်ဖြစ်စေ) sensitized ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်, ထိတွေ့မှုကဤအဟောင်းများကိုလမ်းကြောင်း reactivates ။ ဒီမော်ဒယ်အောက်, ဦးနှောက်အပြီးတိုင်ခဲ့ ပြောင်းလဲ, ဒါပေမယ့် "ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု" တစ် ဦး စကားလုံးလွန်းအားကြီးဖြစ်နိုင်သည်။ ယခင်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းဖူးသူတစ် ဦး သည် (သို့မဟုတ်ထပ်မံဖြစ်ပွားဖွယ်ရှိ) ကိုညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများအားသိမြင်နိုင်ပြီးညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဝေးဝေးနေရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ အသတ်မရှိ။ ဒါပေမယ့်မင်းကသူ့ ဦး နှောက်လို့ပြောမယ် ပျက်စီး? နံပါတျ
အောက်ပါကောက်နုတ်ချက်သည် Nestler ၏စာတမ်းများမှဖြစ်ပြီး DeltaFosB သည်တစ်နေ့နေ့တွင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်ဇီဝအမှတ်အသားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟုသူကအကြံပြုသည်။
အကယ်၍ ဤယူဆချက်မှန်ကန်ပါကနျူးကလီးယပ်စ်တွင် osFosB ပါဝင်မှုပမာဏ (သို့) အခြား ဦး နှောက်ဒေသများရှိလူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေနှင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အတိုင်းအတာကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေါ်ပေါက်စေသည်။ 'စွဲလမ်းခြင်း' သည်ဆေးစွဲခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းသို့မဟုတ်ကုသမှုကာလအတွင်း၎င်း၏တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာခြင်းစသည့်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင် osFosB ကိုစွဲလမ်းမှု၏အမှတ်အသားအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တိရိစ္ဆာန်များသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက osFosB ကိုပိုမိုအားကောင်းစေကြောင်းတွေ့ရသည်။
မြီးကောင်ပေါက် DeltaFosB တာ သာ. ကြီးမြတ်စုဆောင်းခြင်းကိုပြသသတိပြုပါ။ (သူတို့ကအစ dopamine ၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်။ ) အသက်အရွယ် 11-12 မှာအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစတင်ခြင်းဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ limbic ဦးနှောက်များအတွက်အဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် အဘယ်ကြောင့်မတရားသော (ကအလုအယက်) နေတုန်းပဲကို restart ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်နေကြသနည်း